सफलताको कथा – JBLBSL
मेरो संघर्षमय जीवन
सफलताको कथा / By admin
मेरो नाम गहनी देबी चौधरी हो।हाल म झापा जिल्लाको कमल गाउंपालिका वडा नं. ८ मा आफनो परिवारसंग खुशी साथ जीवनयापन गरिरहेकी छु । गरिब र सुकुम्बासी भई जीवन यापन गर्दाको पिडा मलाई राम्ररी थाहा छ । मेरो जन्म ४१ वर्ष अगाडी मोरङ जिल्लाको बाहुनी गा.बि.स. निवासी चौधरी परिवारमा जेठी छोरीको रुपमा भएको थियो। घरमा ६ …
मेरो संघर्षमय जीवन Read More »
लगनशिलताले सफल बनाउंछ
यो कथा मोरङ जिल्ला विराटनगर महानगरपालिका वडा नं.४ निवासी गुलाब देवी कामतको हो । उनी भारतको अररिया जिल्ला निवासी राजेन्द्र रायकी दोश्रो सन्तानको रुपमा जन्मिएकी थिइन । क्रमशः दिनहरु वित्दै गए र उनी विवाह गर्ने उमेरकी भईन । विपन्न परिवारमा जन्मिएकी गुलावको विवाह पनि विपन्न परिवारमा नै भयो । आजभन्दा २४ वर्ष अगाडी जब उनको …
लगनशिलताले सफल बनाउंछ Read More »
सफल महिला उद्यमी मन्जु
मानिसको जीवनकालमा अत्याधिक समस्या, चुनौती र उतारचढाव आईरहन्छन तर समस्यालाई पहिचान गरी सकारात्मक सोचका साथ अगाडी बढ्न सकेमा जस्तो सुकै सफलता पनि हात पार्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणकी पात्र हुन मोरगं जिल्ला धनपालथान गाउपालिका वडा नं.४ निवासी मन्जु देवी स्वर्णकार । ज्यालादारीकोे भरमा ४ छोरा, १ छोरी, श्रीमान र श्रीमती गरी जम्मा ७ जनाको परिवार धान्न …
सफल महिला उद्यमी मन्जु Read More »
खोसिएको खुशी फर्काउन सफल ज्ञानकुमारी
भौगोलिक वनावटले पहाडी क्षेत्र सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका वडा नं.८ को विपन्न पारिवारीक पृष्ठभुमीमा गुजारा चलाउने बुवा चक्र बहादुर मगर र आमा सनिमाया मगरको कोखवाट बि.स.२०४१ साल बैशाख १ गते जेठी छोरीको रुपमा जन्मिएकी ज्ञानकुमारी सुनुवारले प्राथमिक तहको शिक्षा हासिल गरे पश्चात १६ बर्षको कलिलै उमेरमा उदयपुर जिल्ला कटारी नगरपालिका वडा नं. ४ निवासी ससुरा …
खोसिएको खुशी फर्काउन सफल ज्ञानकुमारी Read More »
स्वदेशको पसिना मुल्यवान
स्वदेशको पसिना मुल्यवान मेरो नाम आरती धिमाल हो । म अहिले मेरो परिवार सहित मेचिनगर नपा वडा न १३ स्थित तेलिबारी टोलमा बस्छु । मेरो परिवारमा १ छोरा, २ छोरी र श्रीमान सहित जम्मा ५ जना छौं । हाम्रो हालको पेशा होटल व्यवसाय हो । मानिसको जीवनमा धेरै उतार चढाव, समस्या र चुनौतीहरु आउने गर्छन्, …
स्वदेशको पसिना मुल्यवान Read More »
परिश्रमी मान्छे सफल हुन्छ विराटनगर महानगरपालिकासगं जोडिएको जहदा गाउपालिका वार्ड नं. २ वैरीया निवासी संथाल परिवारमा साइली छोरीको रुपमा २०३५ सालमा हाजी टुडुको जन्म भएको थियो । एक विपन्न परिवारमा छोरी भएर जन्मेपछि सुख अनुभुति गर्ने अवसर कहां हुन्थ्यो र , हांजीको बाल्यकाल पनि दुखै दुखमा वित्यो, उनले विद्यालय गएर अक्षर चिन्ने अवसर समेत पाइनन् …
जीवनको यात्रा Read More »
सात बर्ष अघि जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. मा आबद्ध भएकी बुढीगंगा २ निवासी बालदेबी ॠषिदेवले रु.३०००० ऋण लिएर सानो किराना पसल सुरु गरिन । श्रीमान अर्काको ट्याक्टर चालकको काम गरी मासिक रु.१५००० आम्दानी गर्थे । एक छोरा र तीन छोरी गरी ६ जना परिवारको पालान पोसण तथा शिक्षामा लगानी गर्न प्रयाप्त आम्दानी नभये …
सफलताको सिडी Read More »
मेरो नाम संगिता परियार हो । म अहिले स्टाफ नर्सको अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत छु । मलाई याद छ, आज भन्दा आठ वर्षा पहिले जबा मेरो बिवाह भएको थियो मेरो श्रीमान एउटा मोबाईल मर्मत केन्द्रमा काम गर्नु हुन्थ्यो । मासिक ३००० तलबले हामी २ जनाको परिवार चलाउनु पर्ने बाध्यता थियो । मलाई एकदमै पढ्ने रहर थियो …
पन्ध्र हजार Read More »
Katahari-2, Morang, Nepal
Powered by JBLBSL